क्वारेन्टिनबाट १ लाख ३४ हजार नागरिक बाहिरिए - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Editor-Picks क्वारेन्टिनबाट १ लाख ३४ हजार नागरिक बाहिरिए
काठमाडौं । पिसिआर परीक्षण नै नगरी क्वारेन्टिनमा बसेका अधिकांशलाई घर पठाइएको छ । ४० दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बसेकामा लक्षण नदेखिएपछि घर पठाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार बिहीबार मात्र १० हजार २ सय ५३ जना क्वारेन्टिनबाट निस्किएका छन् । उनले भने, ‘कतिपय २८ देखि ४० दिनसम्म पनि क्वारेन्टिनमा बसे । लक्षण नै नदेखिएपछि परीक्षण गरिरहनुपर्दैन ।’
— पिसिआर परीक्षणविनै धमाधम घर फिर्ता
— संक्रमित १४,५०० नाघे
लक्षण नभएकालाई १४ दिन राखेपछि परीक्षण नगरीकनै पठाइने २० जेठ २०७७ मा जारी गरिएको ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन कोभिड १९’ मा उल्लेख छ । मापदण्डले क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिमा लक्षण नदेखिए पिसिआर परीक्षण नगर्नू भनेको छ ।
पछिल्लो एक सातामा दैनिक ५ हजार जना क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक सातामा दैनिक ५ हजार १ सय ३० जना घर फर्किएका छन् । यसरी हेर्दा एक साताको अवधिमा ३५ हजार १ सय १९ जना घर फर्किएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत शुक्रबार ३ हजार १०, शनिबार ५ हजार ३ सय, आइतबार ३ हजार ९ सय ८१, सोमबार ४ हजार ३ सय ६३ जना क्वारेन्टिनबाट घर गएका हुन् । यस्तै, मंगलबार ४ हजार २ सय ९८, बुधबार ४ हजार ७ सय आठ र बिहीबार १० हजार २ सय ५३ जना क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएका छन् ।
क्वारेन्टिनमा बसकेका व्यक्तिमध्ये अधिकांश भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरू रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमितमध्ये ९८ प्रतिशतमा लक्षण नदेखिएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यसैबीच, नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १४ हजार ५ सय १९ पुगेको छ । पछिल्लो एक दिनमा थप ४ सय ७३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या १४ हजार ५ सय १९ पुगेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार थप ६ सय ६४ जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । योसहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या ५ हजार ३ सय २० पुगेको हो ।
कुल संक्रमितमध्ये ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार हालसम्म देशका सबै जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १० हजार १ सय ६७ जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन् । हालसम्म २ लाख ३७ हजार ७ सय ६४ जनाको आरटी–पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण भएको छ ।
पछिल्लो एक साताको अवधिमा क्वारेन्टिनमा बसी घर फर्किएकाको संख्या
राजधानी समाचारदाता - June 25, 2020
सञ्जीब दुलाल - October 4, 2020
प्रदेश ४ श्रीकृष्ण सिग्देल - March 28, 2020
स्याङ्जा । सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गरेको आज पाँचौ दिन । एक साताका लागि गरेको लकडाउन पाँचौ दिनसम्म आइपुग्दा स्याङ्जाका प्रशासन, स्थानीय निकाय,...
Not-to-be-missed डब्बु क्षत्री - September 18, 2020
प्रदेश नरेन्द्र कार्की - September 26, 2020
प्रमुख टेनिस रोका - July 29, 2020
काठमाडौं । सरकारले संविधान जारी भएको पाँच वर्षपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,...